Going to The Blue House Like This (2021) – Channel Myanmar Share
Original name이렇게 된 이상 청와대로 간다
Created byYoon Seong-ho
StarringBae Hae-sun, Bek Hyun-jin, Heo Jung-do, Jung Seung-kil, Kim Kyung-il, Kim Sung-ryung, Lee Chae-eun, Lee Hak-joo, Yoon-geum Seon-ah
Synopsis of Going to The Blue House Like This (2021)
Going to The Blue House Like This (2022) ဇာတ်လမ်းတွဲအညွှန်း
အပိုင်းသစ် (၂ နှင့် ၃) ရပါပြီ
ဒီတစ်ခါတော့ CM ပရိသတ်ကြီးတို့ အတွက် မင်းသမီးကြီး Kim Sung Ryung ဦးဆောင်ပါဝင်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေး အရှုပ်တော်ပုံ ဇာတ်လမ်းတွဲ အသစ်လေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ comedy, political sitcom အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Best Series Award of the years ဆုကို ရရှိခဲ့တဲ့အပြင် အခြား တစ်ဦးချင်း ဆုတွေမှာလည်း စံကာတင်စာရင်းထဲ ပါဝင်ခဲ့တဲ့အထိ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Korea Series လေးပါ။
ယဉ်ကျေးမှု၊ အားကစားနဲ့ ခရီးသွားဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဖြစ်သူဟာ online meeting တစ်ခုအပြီးမှာ meeting ထဲက ထွက်ဖို့မေ့၊ ကင်မရာနဲ့ အသံပိတ်ဖို့မေ့ပြီး အမြင်မသင့်တာတွေ လုပ်မိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် ဝေဖန်ခံခဲ့ရပါတယ်။ သမ္မတကြီးကလည်း သူ့ရဲ့ သမ္မတ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးခါနီးမှာမှ ဒီလို အဖြစ်အပျက် ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် များစွာ အခက်ကြုံရပြီး ဝန်ကြီးအသစ်တစ်ယောက် မဖြစ်မနေ ခန့်ရမဲ့ အခြေအနေကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီအခြေအနေမှာတော့ အိုလံပစ်မှာ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် အားကစားသမား တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အီဂျောင်းအွန်း (Kim Sung Rung) ကို ယဉ်ကျေးမှု၊ အားကစားနဲ့ ခရီးသွား ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး အဖြစ် ခန့်အပ်ဖို့ ရွေးချယ်လိုက်ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အိုလံပစ်သူရဲကောင်းတစ်ယောက် အဖြစ် နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ ဝန်ကြီးတာဝန်တွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြည်သူတွေက တထစ်ချ ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ တစ်ရက်မှာ နိုင်ငံရေးဝေဖန်သုံးသပ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ သူမရဲ့ ခင်ပွန်း ပြန်ပေးဆွဲခံလိုက်ရတဲ့အခါ …
အီဂျောင်းအွန်းတစ်ယောက် ဘယ်လိုတွေ ဖြေရှင်းမလဲ?
ဒီပြန်ပေးဆွဲမှုနောက်ကွယ်မှာ နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တွေများ ရှိနေမလား? ဆိုတာကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးထဲမှာ ဆက်လက် ကြည့်ရှုကြရအောင်ပါ။
Genres: Comedy, Political, Sitcom
Quality & File Size : 1080p(~750MB) & 720p(~275MB)
Translated by Lwin Lwin Aung, Estel, Hnin Wut Yi, Hajoon & WeWe
Encoded by Kinnov
««« Telegram Channel »»»
[720p] »»» UsersDrive • Yoteshin • MegaUp • StreamSB • Mega.NZ • VIP
[1080p] »»» UsersDrive • Yoteshin • MegaUp • Mega.NZ • VIP
Firt air date2021-11-12
Last air date2021-11-12
Home PageGoing to The Blue House Like This (2021)
Room No. 9(2018)[စ/ဆုံး]
Westworld Season(2) [Complete]
Krypton Season 1 [COMPLETE]